September 16, 2019 - Myitter
ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ကို မြမြ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်ကားရဲ့ ….အဓိကမင်းသားအဖြစ်​ ​တရားဝင်​​ကြေငြာလိုက်ပါပြီ
September 16, 2019 Myitter 0
လူမှုကွန်​ယက်​မှာ အရမ်းကို နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ ဒါရိုက်​တာ ညိုမင်းလွင်​ ရိုက်​ကူးသွားမယ့်​ မြမြရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီးရဲ့ အဓိကမင်းသားက​တော့ တရားဝင်​ ထွက်​​ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ အားလုံးက မထင်​မှတ်​ထားတဲ့ မြမြရုပ်​ရှင်​ရဲ့ အဓိက မင်းသားက​တော့ Myanmar Idol Season3ရဲ့ Winner ဆုရှင်​ ပရိသတ်​အချစ်​​တော်​ ​လေး ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ပါတဲ့​နော်​။ […]
မယ်တော် ကြီး ရဲ့ လျှာကင်ဆာ ကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင် လို့ လူထွက်ပြီး အလုပ် လုပ် ငွေရှာပြီး ဆေးကုပေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး ……….
မယ်တော် ကြီး ရဲ့ လျှာကင်ဆာ ကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင် လို့ လူထွက်ပြီး အလုပ် လုပ် ငွေရှာပြီး ဆေးကုပေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး ………. (Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန်) မယ်တော် ကြီး ရဲ့ လျှာကင်ဆာ ကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ […]
အိန္ဒိယတွင် လူပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်
အိန္ဒိယတွင် လူပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်စတင်ပေါက်ဖွားရာ မဇ္ဈိမတိုင်း ယခုအန္ဒိယနိုင်ငံသည် ၁၂- စုနှောင်းပိုင်းမှစ၍ ဗုဒ္ဓသာသနာသည်အလုံးစုံကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအခါ နှစ်စဉ်မိသားစုပေါင်း ထောင်ချီ လူဦးရေပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ အလုံးအရင်းဖြင့် ကူးပြောင်းလာခဲ့ကြသည်။ ယခုနောက်ဆုံး ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် အခြားဘာသာဝင်များမှ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလာသည့် အခမ်းအနားကို 17-2-2019 နေ့တွင် အိန္ဒိနိုင်ငံ […]
အိမ်အကူကို အက်ဆစ်ဖြင့် လောင်းသည့် အမျိုးသမီး (၂) ဦးအား ထောင် (၁၅) နှစ် အမိန့်ချလိုက်ပါပြီ….
အိမ်အကူ မိန်းကလေးကို အက်ဆစ်ဖြင့်လောင်းသည့် အမျိုးသမီး (၂) ဦး အား အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၅) နှစ် ကျခံရန် အမိန့်ချ စက်တင်ဘာ ၁၆။ မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တစ်ခုအတွင်း အိမ်အကူအဖြစ် အလုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို အက်ဆစ်ဖြင့်လောင်းခြင်း၊ မျက်စိကွယ်အောင်လုပ်ခြင်း တို့ကို […]
မိဘများသည် သားသမီးများ၏ စွန့်ပစ်ခံဘဝမှ ကင်းဝေးကြပါစေ
မိဘများသည် သားသမီးများ၏ စွန့်ပစ်ခံဘဝမှ ကင်းဝေးကြပါစေ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဆိုင်မြို့ လူမှုကရုဏာအသင်းဥက္ကဌ ကိုစိုင်းမှ ကျွန်တော်တို့ ကလျာဏမိတ္တ ရှင်မှုကူညီရေးအသင်းအားအကူညီတောင်းလာပါတယ်။ ကဲ ကြားလိုိ့မှကောင်းကြသေးရဲ့လား အရပ်တို့ရေ့…မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဆေးသွားကုပေးမယ်ဆိုပြီး သားသမီးများက မျက်စိနှစ်ဖက်ကန်းနေသော အနန္တဂိုင်းဝင် ကျေးဇူးရှင် မွေးမိခင်ကြီးအား ထ်ိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနားမှာ အမေ […]
ထူးခြားတဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ လူ့ လောကကြီးမှာ ဒီလို လူမျိုးလည်းရှိ သေးတာ ဝမ် သာကြည်နူး ချီးကျူး စရာ
ထူးခြားတဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ ဒီနေ့မနက် ဗဟို စည်ကနေ ပါရမီ သွားဖို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိတဲ့ အငှား ယာဉ် တစီး ကိုတားလိုက်တော့ မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်ပါတယ် ပါရမီ ကို ဘယ်လောက်လဲ လို့ မေးတော့ ဘာမှမ ဖြေပဲကား ပေါ်တက် ဖို့ ပဲ […]
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် မှ လက်ဆယ်ချောင်းလုံး အချိုးခံထားခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးကို လူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားအောင် မေတ္တာနဲ့ ကုသခွဲစိတ်ပေးခဲ့သော ဆရာကြီး…..
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် မှ လက်ဆယ်ချောင်းလုံး အချိုးခံထားခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးကို လူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားအောင် မေတ္တာနဲ့ ကုသခွဲစိတ်ပေးခဲ့သော ဆရာကြီး….. ဆေးရုံကြီးမှာ အရိုး အကြောဝေဒနာရှင် လူနာပေါင်းများစွာကို နူးညံ့သောစကားများပြောကြားပေးရင်း လူနာရှင်တွေရဲ့ဝေဒနာတွေကို ပျောက်ကင်းအောင် စေတနာအပြည့်နဲ့ ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာကြီး…… ဘဝမှာ ကိုယ်အလေးစားရဆုံး မြင့်မြတ်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်များထဲမှ တဦးဖြစ်သော ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် […]
အင်းတော်ကြီးတွင် တရားမဝင် ရွှေတူးဖေါ်နေသော ဘက်ဟိုးယာဉ် (၁၂) စီး ပိုင်ရှင့်မဲ့ ဖမ်းဆီးရမိ
စက်တင်ဘာ ၁၅ ကချင်ပြည်နယ်မိုးညှင်းမြို့နယ် အင်းတော်ကြီးမြို့ အင်းတော်ကြီးဒေသတွင် တရားမ၀င်ရွှေတူးဖေါ်နေသော ဘက်ဟိုးယာဉ် (၁၂) စီး အင်ဂျင်မျိုးစုံအပါအဝင် ရွှေတူးဖေါ်ရာတွင်အသုံးပြုသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နှင့် ၁၃ ရက်နေ့က ပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း အင်းတော်ကြီးဒေသ လုံးတုံနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက သိရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နှင့် […]
မုန်း၍လည်း ကျိန်​စာမတိုက်​နဲ့… ချစ်​ခင်​၍လည်း နောက်​ဘဝပြန်​​တွေ့ပါရ​စေ ဆုမတောင်းပါနဲ့… ဘယ်​​သောအခါမှ မုန်း၍လည်း ကျိန်​စာမတိုက်​ပါနှင့်​.. ချစ်​ခင်​၍လည်း နောက်​ဘဝပြန်​​တွေ့ပါရ​စေ ဆုမ​တောင်းကြပါနဲ့.. ကံ ကံ၏အကျိုးရယ်​ သံသရာဆိုတာကိုရယ်​ ယုံကြည်​သက်​ဝင်​ကြပါ​စေ။ ကံ မှန်​ပါက အကျိုး​ပေးသန်​၏ ပြုသူအသစ်​ ဖြစ်​သူအ​ဟောင်းပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုး​ပေး​တွေပါ။ ပဋာစာရီ လင်​ကို […]
မြန်မာ့သိုင်းပြောင်းပြန်ကိုယ်လုံပညာကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စွမ်းရည်ပြခဲ့ပြီး Myanmar’s Got Talent 2019 Winner ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်သားလေး ဘုန်းမြတ်မင်း
မြန်မာ့သိုင်းပြောင်းပြန်ကိုယ်လုံပညာကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စွမ်းရည်ပြခဲ့ပြီး Myanmar’s Got Talent 2019 Winner ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်သားလေး ဘုန်းမြတ်မင်း Monday, September 16, 2019 ၅ နှစ်သားလေး ဘုန်းမြတ်မင်းရဲ့ ကစားဟန်တွေဟာ 2019 Globel Got Talent […]